iPad Vagadziri - China iPad Fekitori & Vatengesi
Pepa inzwa firimu rePad Pro Pro 10.9 ″ ine yakanaka yekunyora zviitiko uye dziviriro yechidzitiro
Iwe une chero ruzivo rwekunyora uye kudhirowa pascreen dziviriro ye iPad, piritsi pc, asi yakafanana nedhirowa pane girazi-rakatsetseka. Tiri kutsvaga kuvandudza ruzivo rwekunyora uye kudhirowa pane yako iPad, Tablet PC. Iyo firimu yakaita sePepa inogadzirwa kuti ishande mukuwirirana kwakaringana neApple Penzura. Iyo inofarira matt skrini inodzivirira yekunyora, kudhirowa uye kuchengetedza. Iyo Paperlike inotora mabasa ako kuenda padanho repamusoro. Mapepa akafanana nemudziviriri wechidzitiro akagadzirirwa mahunyanzvi uye maartist avo vanoda iwo chaiwo mapepa mune isina mapepa.
2.5D Matte Screen Dziviriro yeApple iPad nhevedzano
OTAO yakakwira kujekesa matte yakadzikama girazi skrini inodzivirira ine anti-kuratidzira basa iro rinogona kunyatso rwisa kubva kune inokuvadza glare uye kudzikisira mwenje kuratidzira kuchengetedza maziso.
iPad Pro 11 ″ 2020 Yakapusa Girazi Screen Dziviriro
Yakagadzirirwa chaizvo iyo iPad Pro 11 uye 2020, OTAO Yakapusa Girazi Screen Dziviriro inopa kukwana kwakakwana kwechigadzirwa. Iyo inoratidzira akacheka-kunze kweiyo kamera, sensors, mutauri uye bhatani, kukwirira kuoneka uye kunzwisisika.
2.5D Anti Bhuruu Mwenje Wakatsamwa Girazi Screen Dziviriro yeIpad Series
OTAO anti bhuruu mwenje girazi rakadzikama girazi screen mudziviriri mafirita anosvika kumusoro kusvika ku43% yemwenje yebhuruu inokuvadza inoburitswa nevakawanda zvakajairika zvemagetsi zvigadzirwa, zvinodzivirira maziso ako kubva padigital eye eye strain. Uye zvakare, inochengetedza foni yako pamadonhwe, inovhara pamucheto-kumucheto kuchengetedza zvimwe zvechidzitiro, uye ine Ultra-Nyowani antimicrobial dziviriro iyo inoderedza 99% yebhakitiriya kukura pamusoro pehupenyu hwe iPhone yako.